Sergio Ramos oo wacdaro ka dhigay Kulamada Caalamiga ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Sergio Ramos oo wacdaro ka dhigay Kulamada Caalamiga ah
Sergio Ramos oo wacdaro ka dhigay Kulamada Caalamiga ah
Sport Bilder des Tages Real Madrid s Sergio Ramos celebrates goal during UEFA Champions League match. November 3,2020. 20201103348
Tababaraha Spain Luis Enrique ayaa ku adkeystay in Sergio Ramos uu baaqi kusii ahaan doono rigoore tuurka ka dib markii kabtanka Real Madrid uu seegay labo laad kulankii barbaro 1-1 ah UEFA Nations League ay la galeen Switzerland xalay.
Ramos, oo 34 jir ah, wuxuu ciyaarayay kulankiisii 177aad ee Spain si uu u jebiyo safashada halyeyga reer Talyaani Gianluigi Buffon laakiin taariikhdii uu sameeyay waxaa daba soctay inuu qasaariyay laa rigoore.
Daafaca ayaa si dhab ah uga soo muuqday kulankaan, isagoo soo afjaray rikoodh cajiib ah oo uu ku dhaliyay 25 rigoore oo isku xigta.
Ramos sidoo kale wuxuu dhalin karay goolal furan ciyaarta dhamaadkeeda, laakiin ma aysan noqon.
Laakiin Enrique ayaa sheegay in Ramos labada rigoodhe ee uu tuuray aysan saameyn doonin doorkiisa xulka.
Ramos wuxuu dhaliyay 25kiisii ​​rigoore ee ugu dambeeyay, laakiin kubada cagta waxa ay leedahay daqiiqado sidan oo kale ah. ”
Xiddiga goolasha badan u dhaliyay Real Madrid iyo Spain, inkasta oo uu yahay daafac, haddana sanadihii ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid rigorada ku fiican, khaladkiisii ​​ugu dambeeyay ayaa yimid kulankii ay Madrid guuldarada 3-2 ka soo gaadhay Sevilla bishii May 2018.
“Waa wax laga xumaado in Ramos uu qasaariyey rigoorooyinka maxaa yeelay sida caadiga ah aad ayuu u fiican yahay” ayuu yiri weeraryahanka reer Spain Dani Olmo.
“Laakiin maskax ahaan aad ayuu u xoogan yahay, waana hubaa in marka xigta uu rigoore qaato uu dhalin doono.”
Previous articleAkhriso:- Natiijada Ciyaarihii dhacay
Next articleWaa kuma Ciyaaryahanka sameeyay baasaskii ugu badnaa xilli ciyaareedkan?